Ukuzisa iFektri yokuYila: iiNtengiso zeSelfowuni zinobunzima ngokulula Martech Zone
Ukuzisa iFektri yokuYila: iiNtengiso zeSelfowuni ziNe ngokulula
NgoMvulo, Matshi 27, 2017 NgoLwesibini, Matshi 28, 2017 UYariv Erel
Intengiso eshukumayo iyaqhubeka nokuba lelinye lamacandelo akhula ngokukhawuleza kwaye acela umngeni kuqoqosho lwehlabathi lokuthengisa. Ngokwe-arhente yentengiso yentengiso iMagna, intengiso yedijithali iya kudlula intengiso yesiko leTV kulo nyaka (enkosi ikakhulu kwintengiso yeselfowuni). Ngo-2021, intengiso ehambayo iya kunyuka iye kwi-215 yezigidigidi, okanye iipesenti ezingama-72 zohlahlo-lwabiwo mali lokuthenga.
Ke unokuthengisa njani uphawu lwakho kwingxolo? Ngokujolisa kwi-AI yorhwebo ekuphela kwendlela yokubamba ingqalelo kukunikezela ngobuchule bokuyila.
Nangona kunjalo abathengi bahlala bebona ukuba iintengiso eziphathwayo ziyahanjiswa namhlanje njengezicaphukisayo okanye ezingenayo. Kweso sifundo sinye seForrester safumana abathengi benika ingxelo yoko Iipesenti ezingama-73 zentengiso ezihambayo kubonwe kusuku oluqhelekileyo ukusilela ukudala amava omsebenzisi aqinisekileyo. Kubathengisi, oku kuthetha ukuba iintengiso zabo eziphathwayo zihlala ziqhuba kakubi. Ngokomndilili, i-0.55 yeedola kuyo yonke idola echithwe kwimikhankaso yentengiso yeselfowuni ayivelisi ixabiso elifanelekileyo lombutho.
Kungenxa yoko le nto siphuhlile Umzi mveliso wobugcisa ™, indawo yokurhuqa kunye nolahleko yesitudiyo seselfowuni esivumela iiarhente, iiarhente zoyilo, abapapashi kunye neenkampani zetekhnoloji yentengiso ngokufanayo ukwenza intengiso ebandakanyekayo kuzo zombini iifowuni kunye nedesktop. Eli qonga lizisebenzelayo libopha i-HTML5 yokuhambisa iintengiso eziqhutywa ziziphumo ngokukhawuleza nangokufanelekileyo ngaphandle kolwazi lokufaka iikhowudi olufunekayo nakwixabiso elinexabiso eliphantsi. Intengiso nganye yahlukile, iyahambelana nokuyingqongileyo, kwaye okona kubaluleke kakhulu, iyabandakanyeka kwaye ibalisa ibali.
Iiseti ezinzulu zeqonga leempawu kunye neempawu ezingaphantsi zivumela yonke intengiso ukuba ibe yodwa kwaye onke amaphulo abonakale. Iqonga lisebenzisa iiwijethi kunye nezenzo ukubuyisela ikhowudi; Tsala kwaye ulahle, ukujonga kuqala isixhobo, iitemplate, kunye nemowudi evulekileyo ye-Canvas ziibhloko zokwakha zeqonga. Iimpawu zibandakanya: Ividiyo engaphandle, iiDynamic Creatives, iNdawo, iMidlalo kunye neLogic, Ukuphendula kunye noMnqamlezo weScreen, nokunye okuninzi.
Ifektri yokuyila iyazisebenzela kwaye kulula ukuyisebenzisa, kubandakanya imigaqo-siseko emithathu ephambili:
widgets: Susa isidingo sekhowudi
AbacebisiChaza xa kukho into eyenzekayo
inyathelo: misela ukuba yeyiphi imisebenzi eyenzekayo.
Ngokubhiyozela ezi nqununu zintathu, nawuphi na umyili unokwenza iiNtengiso ze-HTML5 ezintsonkothileyo, eziphendulayo nezinomdla.
Siyakholelwa ekubeni ukubeka izisombululo zokubhala kwinqanaba lobungcali ezandleni zabo bonke abathengisi, ezinkulu okanye ezincinci, ziya kuvumela iintengiso ukuba zibandakanyeke ngakumbi kwaye ke zisebenze ngakumbi, kwaye oku kubaluleke kakhulu kubudala apho ubumfama bebhanile kunye neebhlokhi zentengiso zikwenza kube nzima kwaye Kunzima ukufikelela kubaphulaphuli konke konke.
Ukuthintela intengiso ngumceli mngeni wokwenene kushishino. Ingxelo ye-Intelligence ye-BI ifumanise ukuba ukugcwala kweselfowuni kuyayibona kathathu intengiso ibhloka kwihlabathi liphela kune desktop. Oku kubeka isoyikiso esikhulu kwiinkampani zemidiya yedijithali ezixhomekeke kwintengiso yengeniso. Ukuba intengiso ibhloka kwiselfowuni ifikelela kumanqanaba edesktop, iinkampani zemidiya zedijithali zaseMelika zinokuphulukana ne- $ 9.7 yezigidigidi kwiifomati zentengiso zedijithali kunyaka olandelayo.
Umzi mveliso, imveliso yethu yesizukulwana sesibini, igcinwe iminyaka yempendulo evela kubathengi bethu kwaye yenzelwe ukuba ikhululeke kwaye yenze isebenze ngakumbi inkqubo yokudala intengiso yemithombo yeendaba ngelixa ibonelela ngeseti yeempawu ukuvumela ukhetho oluninzi olungapheliyo. Siyakholelwa ukuba sisiphumo sokuphumelela kweempawu kunye nabathengi ngokufanayo.
tags: umzi mveliso wokuyilaIsikrini esinqamlezileyoIzinto eziDalayoimidlaloindawoingqiqoIntengiso yeselfowuniIndawo yentengiso yeselfowuniIvidiyo engaphandlenoluphendulayo
U-Yariv Erel ungumseki kunye ne-CEO ye njeAd, Itekhnoloji yokuyila inkampani inikezela ngeqonga elipheleleyo lokuyila intengiso kubuchule bokwenza iintengiso zemithombo yeendaba ezityebileyo. Amanqaku amosha imali kwaye abeke emngciphekweni igama kwiintengiso zedijithali ezingasebenziyo. Ukubandakanyeka kwe-JustAd, iintengiso ezonga iindleko zenza amava omsebenzisi anentsingiselo.